ပို့စ်တင်ချိန် - 5/27/2014 05:09:00 PM
''အကျီင်္လှလှလေး ၀တ်ဖို့ Emergency ၇ရက်အတွင်း ၀ိတ်ချနည်း''
သူငယ်ချင်း မင်္ဂလာဆောင်သွားစရာ ရှိလို့၊ ညစာစားပွဲ သွားရမှာမို့ အရေးပေါ် ၁ပတ်အတွင်း ၀ိတ်ချချင်ရင် အလုပ်ဖြစ်တဲ့ နည်းလေး တစ်ခုကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ဂေါ်ဖီထုပ်ဟင်းချို ချက်နည်းလေးပါ။ ဒီနည်းက ရေရှည် ၀ိတ်ချချင်သူအတွက်တော့ အလုပ်မဖြစ်ပေမယ့် ၁ပတ်အတွင်း အကျီင်္လှလှလေး ၀တ်ဖို့အတွက်တော့ သင့်လျော်တဲ့နည်းပါ။
ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ညီညွှတ်တဲ့ အသီးအရွက်များဖြစ်တဲ့ ဂေါ်ဖီ၊ မုန်လာဥနီ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ မှို စသည့်တို့ဖြင့် ပြုတ်ထားသော ဟင်းချိုကို ထမင်းနဲ့ ဟင်း နေရာမှာ အစားထိုး စားသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဟင်းချိုချည်းပဲ နေ့တိုင်းစားလို့ ဘယ်လို ဗိုက်ပြည့်မှာလဲလို့ ပြောစရာရှိပါတယ်။ ဂေါ်ဖီထုပ်ဟင်းချိုအပြင် သူ့နေ့အလိုက် သစ်သီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အမဲသား၊ အာလူး စသည်ဖြင့် တနေ့နဲ့ တနေ့ သူရဲ့ plan အတိုင်း အလှည့်ကျ စားသွားရင် ၁ပတ်အတွင်း အကျီင်္လှလှလေးတွေ ၀တ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဂေါ်ဖီထုပ်ပြုတ်ဟင်းချို နှင့် ငပျောသီးမှ လွှဲ၍ မိမိကြိုက်နှစ်သက်သော သစ်သီးများကို စားနိုင်သည်။ အရည်အတွက် မချိုသော လဘက်ရည်၊ cranberry juice နှင့် ရေကို သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
ဂေါ်ဖီထုပ်ပြုတ်ဟင်းချို နှင့် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စားသုံးနိုင်သည်။ ပဲနှင့် ပြောင်းဖူးကိုတော့ မစားသုံးပါနှင့်။ ညစာအတွက် ဆုကြေးအနေနဲ့ အာလူးကင်ကို ထောပတ်နဲ့ တွဲဖက် သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒုတိယနေ့အတွက် သစ်သီးများ မစားပါနှင့်။
ပထမရက် နဲ့ ဒုတိယရက်ကို ပေါင်းပြီ ဂေါ်ဖီထုပ်ဟင်းချို၊ သစ်သီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် အားလုံးကို သုံးဆောင်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အာလူးကင်တော့ မပါပါဘူး။
ဂေါ်ဖီထုပ်ဟင်းချို နှင့် ငပျောသီး (စားနိုင်သလောက် အများဆုံး ၈လုံး) လောက်စားနိုင်ပြီ အဆီမပါသော နွားနို့(အများဆုံး ၂ခွက်) သောက်နိုင်ပါတယ်။
အမဲသား ၂၂အောင်စ၊ ခရမ်းချဉ် (အများဆုံး ၆လုံး) ကို စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ အမဲသား မစားသူများအတွက် အရေခွံမပါသော ကြက်သား(သို့)ငါးကို ပြုတ်၍ဖြစ်စေ၊ ကင်၍ဖြစ်စေ စားသုံးနိုင်သည်။ ခန္ဒာကိုယ်ထဲမှ uric acid ကို ဖယ်ရှားရန် တစ်နေ့လုံး ရေကို ၆ခွက်မှ ၈ခွက်ထိ သောက်ပေးပါ။ သို့ပေမယ့် ဂေါ်ဖီထုပ်ဟင်းချိုကို အနည်းဆုံး ၁ကြိမ်တော့ စားဖို့ မမေ့ပါနှင့်။
တနေကုန် အမဲသားနှင့် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အရွက်တွေကို သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။ အမဲသားကို ၂၊ ၃တုံးထိပင် သုံးဆောင်နိုင်ပါသေးသည်။ သို့သော် အာလူးကင်တော့ မစားပါနှင့်။ ဂေါ်ဖီထုပ်ဟင်းချိုကတော့ အနည်းဆုံး ၁ကြိမ်သောက် စားပေးပါ။
ထမင်းအညှိ၊ မချိုတဲ့ သစ်သီး နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် စားလို့ရပါတယ်။ ဂေါ်ဖီထုပ်ဟင်းချိုကိုတော့ အနည်းဆုံး ၁ကြိမ်တော့ သောက်ပေးပါအုန်း။
မှတ်ချက် ။ ။ ဒီဝိတ်ချနည်းက ရက်တို ရရက်အတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ၇ရက်ပြည့်သွားလျှင် ၂ပတ်ပုံမှန် စားနေကျအတိုင်း ပြန်စားပြီမှ ဒီဝိတ်ချနည်းအတိုင်း ပြန်စားရမှာပါ။ ရေရှည်စားဖို့ သင့်လျော်တဲ့နည်းမဟုတ်ပါ။
• ဂေါ်ဖီထုပ် - ၁စိတ် ( တကိုက်စာ အရွယ်ပိုင်းပေးပါ)
• မုန်လာဥနီ - ၂ဥ (ပါးပါးလှီးပါ)
• ငရုတ်ပွစိမ်း - ၂ခု (အစေ့ထုတ် အတုံးသေးများ တုံးပေးပါ)
• မှို - ၁၀ကျပ်သား (ထပ်ခြမ်းခြမ်းပေးပါ)
• ခရမ်းချဉ်သီး - ၂လုံး ( ၈စိမ်စိပ်ပေးပါ)
• ကြက်သွန်မြိတ် - ၁စည်း ( ပါးပါးလှီးပါ)
• ဟင်းခတ်အမှုန့် - စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
• ငရုတ်ကောင်းမှုန့် - အနည်းငယ်
• တုံယမ်းအခဲ - ၁ခဲ (optional)
• ဆား (လုံးဝ မထည့်ရပါ)
၁။ အိုးတစ်ခုထဲ ရေ(ရခွက်) ထည့်ပေးပြီ ဆူအောင်တည်ထားပေးပါ။
၂။ ဆူလာလျှင် ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်သော (ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ငရုတ်ပွစိမ်း၊ မုန်လာဥနီ)တို့ကို ထည့်ပေးပါ။
၃။ ပြီမှ အနူလွယ်သော (မှို၊ ခရမ်းချဉ်သီး) တို့ကို ထည့်ပေးပြီ အရသာအတွက် ဟင်းခတ်မှုန့် နှင့် တုံယမ်းအခဲတို့ကို ထည့်ပေးပါ။
၄။ ဟင်းရွက်များ နူပြီဆိုလျှင် ကြက်သွန်မြိတ်၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်တို့ကို ဖြူးပေးပါ။
မှတ်ချက် ။ ။ ဂေါ်ဖီထုပ်ဟင်းချိုကို များများစားပေးလျှင် ပိုဝိတ်ကျသည်။
ဘာသာပြန် : Wutyee Food House
Reference: Cabbage Soup Diet
by Wutyee Food House
အမျိုးသမီးတွေ မတ်တတ် အပေါ့စွန့်နိုင်တဲ့ ကိရိယာ ပစ္စည်း
လျှပ်စစ်ဓာတ်စီးမှုပြုပြင်ရာမှ ဓာတ်လိုက်၍ အုတ်တံတိုင...
ဒေါ်လာတစ်သိန်း ထောက်ပံ့မည့် Ideabox အစီအစဉ်ကို စတင်...
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း eGovernment ဆက်ကြောင်းမျ...
ပိုက်ဆံစုမိတဲ့သူတွေရဲ့ တူညီတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ၅ ချက်
Hair Loss ဆံပင် ကျွတ်ရင်
မြန်မာ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို အထောက်အပံ့ပေးဖို့ အေ...
Marbel လျှပ်စစ် စကိတ်
၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေးဟောပြောပွဲ ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုအချို့ ...
ထိုင်းမယ်စကြ၀ဠာအလှမယ်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ချီးကျူးခံရတဲ့ ...
မီဒီယာအများစု အသိမှတ်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့ ထွက်ရှိလာ...
ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်းမှစတင်ကာ ရန်ကုန်-နေပြည်တော် ခရီးစ...
အိပ်မက်ထဲက မဇ္ဈိမ နှင့် အိန္ဒီယဒိုင်ယာရီ အပိုင်း (၁)
၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး တပ်မတော်သားများ လက်မှတ်ထိုးရန် ဒေါ်စ...
ကမ္ဘာ့အ၀ဆုံး မက္ကဆီကန် အမျိုးသား ကွယ်လွန်
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ရှိ ဆတ်ရိုးကျ ကယ်ဆယ်ရေးစခ...
စမတ်ဖုန်း ကင်မရာများကြောင့် အမှတ်တရ ခံစားချက်မျိုး...
ပြည်ပကုမ္ပဏီများသို့ ပေးရန်ရှိသည့် ပဲကြွေး ငါးပုံတစ...
မောင်တောတွင် ခြိမ်းခြောက် ငွေတောင်းသည့် ဘင်္ဂါလီတစ်ဥ...
ထိုင်းလယ်သမားများကို စပါးဖိုးငွေ စတင်ထုတ်ပေး
တရုတ်သင်္ဘော ဝင်တိုက်သဖြင့် ဗီယက်နမ်ရေယာဉ်တစ်စင်း နစ...
တေလာဆွစ်ဖ်၏ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် ဖျော်ဖြေပ...
နိုင်ငံရေးပါတီများအတွက် မြေကွက်နှင့်ကားချပေးရန် ကမ...
စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ ဆက်ပြီး ကြွယ်ဝချမ်းသာလာကြဦးမယ်
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ချစ်သူတိုင်း သတိထားသင့်သော ခွေးရူး...
ခေတ်တစ်ခေတ် နောက်ကျ ကျန်ရစ်ခဲ့သော မျိုးဆက်သစ်များ
ဘရာဇီးဘောလုံးအသင်း စီးလာသည့်ကား ဆန္ဒပြခံရ
မြန်မာ့ဆင်ရိုင်း ၃၄ ကောင်ခန့် ပျောက်ဆုံးပျက်စီး
အူရီးဒူးက ကျောင်းများအပါအ၀င် နေရာတစ်ရာခန့် အင်တာနက...
ဘိုလီးဗီယားတွင် အအေးလှိုင်းကြောင့် ကျွဲနွား ၆၀ ခန့်...
နေပြည်တော်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စီးနင်းလိုက်ပါလာ...
သူရဲကောင်း ရွေးချယ်ပွဲ - ဟာသ
လွှတ်တော်အမတ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ မအားလို့ ခိုင်းဖို့ ...
မလေးရှားလေကြောင်း MH370 ၏ ဂြိုဟ်တုအချက်အလက်များ ထု...
ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုရားဟော နည်းလမ်းအရ ချစ်သူတို့ ဘဝဆက်တိုင်...
သယံဇာတပေါတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၉၅ရာနှုန်း တစ်ရက်ဝင်ေ...
စပြပြချင်းအပတ်မှာတင် စုစုပေါင်းဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၉၁ သန်...
ထောင်ကျနေသော ဗင်နီဇွဲလားအတိုက်အခံ မြို့တော်ဝန်နှစ်...
ရန်ကင်းတီတီစီကျောင်း ၀န်ကြီးလက်မှတ်ကိစ္စ သက်ဆိုင်ရာ...
ပြန်ပေးဆွဲခံထားရသော ကျောင်းသူ ၂၀၀ ကျော်ရှိသည့် နေရ...
သံလွင်မြစ်ပေါ်တွင် ပထမဆုံးတည်ဆောက်မည့် ရေအားလျှပ်စစ...
ဘုရင့်ထောက်ခံချက်ရယူပြီးနောက် ဆန္ဒပြမှုများ ဖြစ်ပွား...
ထိုင်းနိုင်ငံရေးပြဿ နာများ သက်တမ်းကြာလာပါက မြန်မာေ...
ရွှေမျှောကျင်းအတွင်း လေပြတ်၍ လူနှစ်ဦးပြုတ်ကျ သေဆုံး
ထိုင်းအရေး ဦးသိန်းသိန်းစိန်ထံ စာပို့မယ်
လျှပ်စစ်မီးရရှိမှုနှင့် အင်တာနက် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ...
လုပ်ငန်းစီစစ်မှုအားနည်း၍ စစ်တွေမြို့ ကွန်ကရစ်လမ်းမြ...
ချစ်သူ Calroline နှင့် ဆက်ဆံရေးသည် အရင်အတိုင်း အေး...
ဇနီးနှင့် မသင်္ကာသူ ၃ ဦးအား ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှ ဓါး/ပုဆ...
အခြေခံဥပဒေပြင်ရေး လူထုဆန္ဒ လက်မှတ်တွေ ရက်၅၀ကျော်ကြာ...
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ငြင်းဆန်သည့် လွှ...
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ခြောက်မြို့နယ် တိုက်ခန်းအငှားဈေး...
သမီးရည်းစား ချိန်းတွေ့နေစဉ် ဓားထောက်လုယက်
ဘရာဇီးမှာ တွေ့ရှိတဲ့ ဧရာမ အနာကွန်ဒါ မြွေ
ခရီးသွားတဲ့အခါ ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေကို လွယ်ကူလျှင်မြန်စ...
ထိုင်းနိုင်ငံကဲ့သို့ အာဏာသိမ်းသည့်ဖြစ်စဉ် မြန်မာနိ...
မောင်တောနယ်စပ်ကျေးရွာတွေမှာ လုံခြုံရေးအတွက် လက်နက်...
ကမ္ဘာ့ဖလားကာလအတွင်း ရော်နယ်လ်ဒင်ဟို၏ နေအိမ်ကို ငှား...
ဗီဇာသက်တမ်း တိုးခွင့်မပြုသဖြင့် ဦးမိုးသီးဇွန် ထို...
ပြည်သူ့လည်ပင်းဝထိ စီးမျိုလာသော မီတာခများ
ကလေးငယ်များတွင် ဖြစ်တတ်သော အရေပြားရောဂါများ ကာကွယ်...
မင်္ဂလာပွဲတွင် ဘောလုံးကျွမ်းကျင်မှု ပြသခဲ့သည့် ဘောလုံ...
ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီက မြန်မာဝန်ထမ်းများအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံ...
ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် မန်ယူနည်းပြဟောင်း မိုယက်...
သုံးနှစ်အတွင်း စက်မှုဇုန်မြေ ဈေးနှုန်း ငါးဆခန့် မြင...
၅၉(စ)ပြုတ်ရင် ဘာနိုင်ငံဖြစ်သွားမလဲ?? ဒေါက်တာခင်နို...
ပုဒ်မ ၄၃၆ဟာ ၁ဝဝ%အထက်ကျော်မှ ပြင်ရမယ်လို့ဆိုတာကြောင...
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် . . .
ပြည်တွင်းမိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးပြုသူအရေအတွက် ရှစ်သန်...
မြန်နှုန်းမြင့် 3G အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုက ပြည်ပရင်းနှ...
ကျောင်းအုပ်ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်သည်ဟုဆိုကာ ...
DVB - အိန္ဒိယ ရထား၂စင်းတိုက် လူ၄၀သေဆုံး ၁၅၀ကျော်ဒဏ်...
ယခုနှစ်တွင် အလယ်တန်းကျောင်းသားများ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ် ...
ဂျပန်နာမည်ကျော် AKB48 ဂီတအဖွဲ့မှ မိန်းကလေးနှစ်ဦး ...
ကျပ် ၁၅ဝဝ ထက် မပိုသည့် မိုဘိုင်းဆင်းမ်ကတ်များ ကို ...
အိမ်ခြံမြေ တစ်ကြိမ်ထက် ပိုမိုဝယ်ယူမှုတိုင်း သတ်မှတ်...
ယောက္ခမနှင့်စကားများပြီး သမက်ဖြစ်သူက နေအိမ်မီးရှို့
ယူနတီဂျာနယ် သတင်းထောက်များကို ဆက်လက်စစ်ဆေး
ဆန္ဒပြမှုများကို ဆက်လက်သည်းခံလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု ထိုင်း...
ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ စပယ်ယာနဲ့ ခရီးသည် အမျိုး သမီးစကားမျ...